Ubuntu လေး ပြန်သုံးချင်လို့. - MYSTERY ZILLION
Ubuntu လေး ပြန်သုံးချင်လို့.
December 2009 edited December 2009 in Linux/Unix
ကျွန်တော် Ubuntu 9.10 လေးကို စမ်းသုံးနေတာ..တော်တော်လေး အဆင်ပြေနေပါတယ်.. ဟိုနေ့က..အဲဒီ Ubuntu သုံးနေတဲ့စက်မှာ.. Fedora 12 ကို စမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီး..တင်လိုက်..အဲဒီမှာ.. ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့. Ubuntu လေးက..ဘယ်ပျောက်သွားမှန်း မသိဘူး ဖြစ်သွားတယ်..ဗျာ.. Fedora ကိုတော့သုံးလို့ရနေပါတယ်....ကျွန်တော်က..စက်တစ်လုံးမှာ.. C: ထဲကို. Windows XP တင်တယ်. E: ထဲကို Windows7တင်ထားတယ်.. အဲဒီထဲကနေမှ..စမ်းချင်လို့ဆိုပြီးူ.. Ubuntu 9.10 ကို Drive ထဲက နေ.. 10 G လောက်ယူပြီး တင်သုံး နေတာ.. အဲဒါ အဆင်ပြေနေပါတယ်.. အခု.. Fedora 12 ကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးတော့ စမ်းချင်တယ် ဆိုပြီး အဲဒီစက်မှာပဲ.. Driver ထဲက နေ..free 10 G ယူပြိးတော့ တင်စမ်းလိုက်ပါတယ်. Fedora ကို သုံးလို့ရသွားပါတယ်.. အဲဒီမှာ.. စက်ကို restart ချပြီး ပြန်ဖွင့်လိုက်တော့... Ubuntu က.. ပျောက်သွားပါတယ်. Fedora ပဲ အရင်တက်လာပြီးတော့.. တခြား Xp နဲ့7ကို ပဲ ရွေးခိုင်းပါတော့တယ်.. Ubuntu လေး .. ရော.. boot တက်တဲ့အခါ မှာ. ရွေးခိုင်း အောင်လို့..ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာ.. ပြောပေးကြပါအုံး ခင်ဗျာ... Fedora တင်လိုက်တာက.. Ubuntu ကို ဖြတ်ပြီးတင်တာ မဟုတ်ပါဘူး.. သီးသန့် ဖရီး စပေ့..ယူပြီးထင်ထားတာပါ... Ubuntu က Boot မရွေးခိုင်းဘူး ဖြစ်နေလို့ပါ.. Fedora ရော.. Ubuntu ရော... Other boot အနေနဲ့.. xp နဲ့7ရော.. Boot ရွေးလို့ရအောင် ကူညီကြပါအုံးနော်......... သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောတာတော့. Boot CD နဲ့ ပြန်လုပ်ရင် ရတယ်လို့တော့ပြောပါတယ်. ကျွန်တော် လည်း Boot CD တော့ စမ်းကြည့်ပါတယ်. ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတာ နဲ့....အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေပါတယ်....... ပြောပေးကြပါအုံးနော်.. ဦးဘန်းတုလေးပြန်သုံးချင်လို့ပါ.......
I think u should change the grub booting....to get your ubuntu ...then if u see the list disk from fedora that your ubuntu disk's have or not...
this will help you...good luck
လုပ်ပါဦးဗျာ Ubuntu 11.04မှာ Skype နဲ့ VLC ကို Terminal ကနေပြီးတော့ ဘယ်လို စတောရမလဲဆိုတာလေးမစ ပါဦး ပညာရှင်တို့ရေ လိုအပ်တဲ့ ဟာလေးပါဒေါင်းဖို့ လင့်လေးပေးပါဦးဗျာ
လုပ်ပါဦးဗှာ Ubuntu 11.04မှာ Skype နဲ့ VLC ကို Terminal ကနေပြီးတော့ ဘယလ်လို စတောရမလဲဆိုတာလေးမစ ပါဦး ပညာရှင်တို့ရေ လိုအပ်တဲ့ ဟာလေးပါဒေါင်းဖို့ လင့်လေးပေးပါဦးဗျာ
For Skype (Need to enable Canonical partner repository)
MZ only allow Myanmar Unicode and English.